होण्डा हर्नेट १६० आर : स्पोर्टी लूक्स उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स | गृहपृष्ठ
Home यातायात होण्डा हर्नेट १६० आर : स्पोर्टी लूक्स उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स
on: २६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०९:४० यातायात
होण्डा हर्नेट १६० आर : स्पोर्टी लूक्स उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स
स्पोर्टी बनोट, नयाँ स्टाइल र ग्राफिक्सका साथ झनै बढी पावरफुल रहेको होण्डा हर्नेटलाई आधुनिक ढङ्गमा निर्माण गरिएको छ ।
फुल एलईडी हेड ल्याम्प र हाजार्ड लाइट स्विचजस्ता अत्याधुनिक विशेषता रहेको यस बाइकमा आपत्कालीन समयमा सुरक्षित रहन तथा कम प्रकाशको बेला प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । उत्कृष्ट ग्रिपरसहित बढी समय टिक्ने सिल चेन रहेको सीबी हर्नेटमा उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स छ । नेपालका लागि होण्डा मोटरसाइकल तथा गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा ज्योति ग्रूपअन्तर्गतको स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले होण्डाको सीबी हर्नेट १६० आर मोटरसाइकल नेपाली बजारमा ल्याएको हो ।
यो प्रिमियम मोटरसाइकल प्राविधिकको हिसाबमा यो उच्च स्थानमा छ । युवावर्गलाई विशेष लक्षित गरेर ल्याइएको यो मोटरसाइकलमा माथि फर्किएको सङ्केत बत्तीसहितको हेडलाइट निकै तेजिलो छ । यसमा एक्स आकारको एलईडी लाइट पनि समावेश छ । होण्डाको लोगो भएको यसको ट्याङ्कमा कार्बन प्याटर्न छ । यसको बाहिरी रूपलाई झन् सशक्त बनाउँदै यसमा पूर्ण डिजिटल मिटर डिस्प्ले पनि जडान गरिएको छ । साथै, यो मोटरसाइकलमा १४० एमएमको रियर टायर छ । यसलाई ५ स्पोक स्पिल्ट अलोई ह्वीलमा जडान गरिएको छ ।
यो मोटरसाइकलमा १६३ सीसी इञ्जिन छ । यसमा भएको सिङ्गल सिलिण्डर इञ्जिनले ८५०० आरपीएममको पावरमा १५ दशमलव ६६ बीएचपी प्रदान गर्दछ र ६५०० आरपीएमको टर्कमा १४ दशमलव ७६ एनएम प्रदान गर्दछ । यो इञ्जिनले १०ः१ को कम्प्रेशन रेशियोमा पावर उत्पादन गर्दछ । साथै, यस मोटरसाइकलमा काउण्टर ब्यालेन्सको पनि सुविधा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले बताएको छ । पाँचओटा रङमा उपलब्ध सो बाइका अगाडि र पछाडि डिस्क ब्रेक छ । साथै, यसमा कोम्बी ब्रेकिङ प्रणालीको पनि व्यवस्था छ ।
होर्नेट १६० आरलाई आरामदायी र आधुनिक बाइक बनाउन कम्पनीले निकै मेहनत गरेको देखिन्छ । यसमा गुड्दाको गति र कति पेट्रोल बाँकी छ भनेर देखाउन डिजिटल डिस्प्ले राखिएको छ । यो बाइकबाट तय गरिएको दूरी उक्त डिजिटल डिस्प्लेमा हेर्न मिल्छ । दुवै पाङ्ग्रामा डिस्क ब्रेकसहितको यसको ब्रेकिङ प्रणाली पनि उच्च गुणस्तरको छ । यसले ६० किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने बताइएको छ ।
यो ‘मिड रेञ्ज सेग्मेण्ट’ बाइक हो र यसको इञ्जिन १ सय ६० सीसी छ । होण्डाले यसअघि पनि यही सेग्मेण्टको होण्डा सीबी हर्नेट बजारमा ल्याइसकेको छ । त्यसैले, हर्नेटको केही अंश नयाँ बाइकमा पनि पाउन सकिन्छ ।
होण्डाको नयाँ बाइक सीबी हर्नेट १६० आर २ हप्ताअघि मात्र नेपालमा आएको थियो । यो बाइकमा आकर्षक लूक्स छ । यसमा होण्डाको बुल्की बडी प्यानल प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी फ्युल ट्याङ्कमा यसको प्रयोग बढी भएको देख्न सकिन्छ । बाइकमा रहेको ५ गियर बक्सले यात्रालाई सहज बनाइदिन्छ ।
सीबी १००० आरजस्तै देखिने हेडल्याम्पले बाइकको लूक्सलाई थप आकर्षक बनाएको छ । यसको अर्को विशेषता स्पोर्टी लूक्स हो । यसको रियरमा रहेको मोनोसक फ्युल ट्याङ्कको सार्प कर्भले बाइकलाई अझ जोडदार बनाएको छ । एक्स–सेप एलईडी टेल ल्याम्पले बाइकमा सुन्दरता थपेको छ ।
यस बाइकको अर्को सबल र सशक्त पक्ष यसको रियर टायर पनि हो । १४०–७० १७ एमआरएफ ज्यापर एसवानले राम्रो ग्रिप दिएको छ । यसले लूक्सलाई मनमोहक बनाउनसमेत मद्दत पुर्‍याएको छ । अगाडि रहेको १००–८० १७ एमआरएफ च्यापर टायरले पनि आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक गरेको छ, जसले गर्दा गुडिरहेको बाइकलाई सहजै रोक्न सकिन्छ । फ्रण्टमा रहेको २७६ एमएम डिक्समा थ्री–सिलिण्डर क्यालिपर प्रयोग गरिएको छ । यसले बाइकलाई आवश्यकताअनुसार चाहेको ठाउँमा समयमै रोक्न सकिन्छ । यसको रियर इण्डमा २२० एमएम डिक्स प्रयोग गरिएको छ । सीबीएस यस्तो प्रविधि हो, जसमा बाइक चलाउनेले फ्रण्ट ब्रेक लगाएमा अटोमेटिक रूपमा रियर ब्रेक संलग्न हुन्छ ।
यस बाइकको १६२ दशमलव ७१ सीसी इञ्जिनले १५ दशमलव ७ बीएचपीले ८५०० आरपीएम दिन्छ भने उच्चतम टर्क १४ दशमलव ७६ एनएमले पनि ८५०० आरपीएम नै दिन्छ । कम्पनीका अनुसार होण्डा सीबी हर्नेट १६० आरको मूल्य नेपाली बजारमा २ लाख ९९ हजार ९ सय तोकिएको छ । ओरेञ्ज–ब्ल्याक, ह्वाइट–ब्लू, रेड–ग्रे, ग्रीन–ब्ल्याक र एलो गरी पाँच फरक रङमा बाइक उपलब्ध छ ।
तीर्थ कुमार थापा
यो जस्तो कवाडी बाईक मैले अरु देखिन जब ब्रेक लगायो बाईक पल्टिन्छ खटारा
Break lagera paltine2reason hunxa
1- Tapain lai break launa audaina, break 60/40 ko ratioma hannu prxa (rear 60-front 40)
2- ya ta hajur hornet lai negatively linuhunxa
my self ashih parajuli from butwal, i have also my hornet 2016 model in red color! i am fully satisfied with this model! best part of its is best mielage 50 km per ltr
i am using this bike from2years, need to use break every moment but iam not fallingdown
LeaveaReply to ashish parajuli Cancel Reply